Usebenzisa njani iiDeshi eziMfutshane neziFutshane xa usibhala
Olude olude - yintoni iigrama ezibiza ngokuba ziimeshi - ziyamangalisa. Imigca emide ethe nkqo itsala iliso kwaye ibambe ingqalelo yakho. Kodwa iideshi ezinde aziboniswanga nje. Bafaka ulwazi kwisivakalisi kwaye bazisa uluhlu. Iideshi ezimfutshane - ngobuchwephesha, iideshi - azibonisi njengabazala babo ababanzi, kodwa ziluncedo. Iideshi ezimfutshane zibonisa uluhlu okanye ukudibanisa amagama xa igama ukuya okanye kwaye icacisiwe.
Ixesha elide ekubhaleni
Umsebenzi ophambili wedash kukuxelela umfundi ukuba utsibe imikhondo kwisihloko esitsha (nangona sinxulumene), okomzuzwana nje. Nantsi eminye imizekelo:
Emva kokuba sithenge iincakuba zenzwane - idayinaso ekulo mboniso ingasebenzisa itrim, uyazi - siza kuma kwivenkile yedonut.
Ukuma kwelinye uzipho olwenziwe ngesandla, idayinaso-ehanjiswe kwimyuziyam kwiyure nje enye ngaphambi kokuba kuvulwe - yinkwenkwezi yomboniso.
Ulwazi oluphakathi kweedeshi alukho mxholweni. Yikhuphe, kwaye isivakalisi siyavakala. Izinto ezingaphakathi kweedeshi zinxulumene nolwazi kwisivakalisi sonke, kodwa sisebenza njengophazamiso kwindawo ephambili oyenzayo.
Amagama phakathi kwesibini sedeshi anokwenza okanye angasenzi isivakalisi esipheleleyo. Kulungile. Nangona kunjalo, abanye abantu basebenzisa ideshi enye kuphela ukufumana isigwebo esipheleleyo kwesinye isivakalisi esipheleleyo. Hayi kulungile! (Kwakhona, umba onokuthi uhlangane nawo kuvavanyo olusemgangathweni.) Nanku umzekelo:
zithatha ixesha elingakanani iziphumo zovavanyo lweziyobisi
Akulunganga: Umgcini upeyinte iorenji yedinosaur- wonke umntu uwuthiyile umbala.
Kunene: Umgcini upeyinte iorenji yedinosaur- wonke umntu uwuthiyile umbala-kuba wayefuna ukuyinyusa le ndawo.
Kananjalo kulungile: Umgcini upeyinte iorenji yedinosaur; wonke umntu uyawuzonda umbala.
Xanax ikwenza ulambe
Kananjalo kulungile: Umgcini upeyintile i-orenji yedayinaso - umbala ozondwa ngumntu wonke.
Isivakalisi esingumzekelo wokuqala asilunganga kuba udwi akakwazi ukudibanisa izivakalisi ezibini ezipheleleyo. Umzekelo wesibini ulungile kuba isibini sedeshi sinokujikeleza isigwebo esipheleleyo esifakwe ngaphakathi kwesinye isivakalisi esipheleleyo. Umzekelo wesithathu uthintela ingxaki ngokudibanisa izivakalisi ezibini kunye nesemicolon. Umzekelo wesine uchanekile kuba udwi unokongeza ulwazi olongezelelweyo ekupheleni kwesivakalisi, ukuba nje ulwazi olongezelelweyo alusosivakalisi sipheleleyo. ( Umbala ozondwa ngumntu wonke ayisosivakalisi sipheleleyo.)
Umsebenzi wesibini wedeshi kukuhambisa umfundi ukusuka kokuqhelekileyo aye kwinto ethile, rhoqo ngokunika inkcazo. Jonga le mizekelo ilandelayo:
Ndicinga ukuba ndinayo yonke into endiyifunayo kusuku lokuqala lwenkampu - ukutshiza i-bug, ukutshiza iinwele, ibhloko yelanga kunye nomdlali weDVD.
Yonke into endiyifunayo ngokubanzi; ukutshiza i-bug, ukutshiza iinwele, ibhloko yelanga kunye nomdlali weDVD zizinto ezichaziweyo.
U-Louie uthe uza kuyenza ugu-ug-ba - ukwenziwa kwesiko ngesiqwenga sokuqala sentshungama.
Inkcazo ugu-ug-ba ngu ukwambulwa kwesiko kwesiqwenga sokuqala sentshungama .
Oodwi abade kunokuba mnandi ukubhala, kodwa akusoloko kumnandi ukufunda. Ngotshintsho oluncinci lwezantya, kraca umbono omtsha kwisivakalisi sakho. Musa nje ukungena rhoqo okanye umfundi wakho uyahendeka ukuba aphume kude.
Ukuba uluqonda kakuhle olu phawu lweziphumlisi, ufanele ibheji yegrama esemthethweni - enomtsalane kakhulu kumatheko e-cocktail! Iifeshini ezimfutshane zibonisa uluhlu:
Ukusukela ngoMeyi – Septemba, abo bagwetywayo bathena iikoma ngokusuka kuncwadi olubhalwe ebusika.
Oonobumba abafutshane nabo bayabonakala xa ushiya igama ukuya phakathi kwezinto ezimbini:
Uloliwe waseNew York –Filadelphia uhlala exesheni.
Okokugqibela, umda omfutshane uqhagamshela izinto ezimbini okanye ezingaphezulu ezilinganayo xa kwaye icacisiwe:
Ubudlelwane be-catcher-pitcher bubalulekile kwimpumelelo yeeYankees.
Musa ukubhidanisa amachaphaza amfutshane ngamahashe.
Iziphumo zeepilisi ze-estrogen
intlungu kwicala lenzipho
idosi ye-motrin yabantwana abancinci
indlela yokufunda iisayinithi eziphambili
iziphumo ebezingalindelekanga ze-betamethasone